Hetra tsy mivantana alaina amin’ny fandaniana ( Droit d’Accise) no alaina amin’ny sigara ary ny hetra azo avy aminy no ambony indrindra ao. Manome 17% amin’ny kitapom-bolam-panjakana ny Droit d’Accise ka ny 57%, izany hoe mihoatra ny antsasany dia avy amin’ny sigara avokoa. 376 miliara d’Ariary ny hetra nampidiriny tamin’ny taona 2017 tao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Na misy aza ireny fanehoana an-tsary sy an-tsoratra amin’ny fonon-tsigara ireny dia tena mifoka sy manjifa ny Malagasy ary tena mampidibola be amin’ny fanjakana. Misy amin’ireo mpivarotra enta-madinika aza no mahalafo manodidina ny 12 hatramin’ny 20 fonosana isan’andro. Iaraha-mahita ihany koa anefa ny fisondrotam-bidin’ny sigara tao anatin’ny 10 taona farany. Vao tamin’ny 2014 no nisondrotra 50 Ar ny sigara marika Good Look. raha 150 Ar ny vidiny dia lasa 200 Ariary. Izany hoe 4000 Ar ny 20 isa kanefa manodidina ny 2500 Ar hatramin’ny 3000Ar tamin’ny taona 2014.